[PANAS] PI Bala Dedah Najib Dalang Pembunuhan Altantuya
Rapes by Burmese security forces ‘may cause more strife’ in troubled region
It is dangerous for Muslims of Myanmar because the Myanmar Government is wrong
Clashes Over Land Seizures Batter the Police in Myanmar
မောင်မောင်(ရွှေကရဝိက်) “ အဖေသို့ တမ်းခြင်း ”
[BERGAMBAR] Sahih - Jejambat Dekat Tol Putrajaya/Cyberjaya Runtuh
Pembaziran Melampau BN: Itulah Yang Bankrapkan Negara - Aziz Bari
In Memory of Eugene Joseph Amato
ပြည်တွင်းနေ ဗုဓ္ဒဘာသာအကြမ်းဖက်ထကြွသောင်းကျန်းသူ သန်းထွဋ်အောင်
ရခိုင်ပြည် ကျွန်သက် အနှစ် (၂၂၆) နှစ် ကြာသောအခါ“မြွီပွီးနှင့် ရခိုင်ကိုတွိလျှင် ရခိုင်ကိုအယင်သတ်ရမည်”
Posted: 28 Feb 2013 09:27 AM PST
Now they are the ones who fired warning shots at us! Who are the intruders, us or the Kiram Sulu followers occupyingavillage in Lahad Datu, Sabah?
This Sultan Kiram is now on Manila's wanted list for what he did but Kiram instead warned Manila not to meddle in his affairs and demanded Kuala Lumpur foradialogue when his claim on Sabah, OUR LEGITIMATE TERRITORY, stays!
The Filipino group, holed-up in Lahad Datu for the third week, confirmed reports of gunfire about 24 hours ago but claimed that they were merely shots to warn off the Malaysian security forces.
Azzimudie Kiram, the brother of self-proclaimed Sulu sultan Jamalul Kiram III, told Malaysiakini thatasentry spied six Malaysian soldiers approaching Kampung Tanduo some 130km from Lahad Datu town at around 5pm yesterday and fired into the air.
So, what is there to discuss? They arealot of uncivilised people who went against all international law and convention, putting upademand that could heavily cost Malaysia's good relations with the Philippines.
Come on, Hisham, Zahid and Anifah. Time's up! No more extension to demands for 'rooms for negotiation'. They toyed around with our patience and integrity, snubbing at their own President at Malacanang and refused to leave or surrender.
These people are terrorists!
If they know their rights, they must recognise others' too. Not only had they breached our immigration law but also our security line by bringing in guns and ammo of all sorts. Had we shot them before they landed on our beach, would it be wrong?
Now, they are taking advantage of our patience and 'goodwill' by prolonging the conflict. What is our final stand here?
The 3-week standoff is already putting us as the 'hooligans' to Philippines media, with reports that the drama is taking its toll on Filipinos working in Sabah, that many employers are already sacking them over the Lahad Datu issue.
KUALA LUMPUR, Feb 28 – The intrusion of almost 200 armed Filipinos in Lahad Datu has caused the termination of many Filipino workers in Sabah, the Philippine Daily Inquirer reported today.
Inquirer.net, the online news site of the Philippine Daily Inquirer broadsheet, reported today that several Filipinos lost their jobs as laundry and oil palm plantation workers in Tawau and Semporna since last week, after the Lahad Datu stand-off began on February 9.
"She (Myrna) told me her employer advised her to go home so she would not be implicated in the Lahad Datu situation," Madeline, the mother ofalaundry attendant called Myrna, was quoted as saying by the Inquirer today, without giving their last names.
But nobody is defending us or rebutting such stories!
'Susah-susah', just let them stay!
Posted: 28 Feb 2013 09:43 AM PST
Penyiasat persendirian, P Balasubramaniam (PI Bala) mendedahkan, 'VVIP' yang terlibat menjadi dalang di sebalik pembunuhan wanita Mongolia, Altantuya Shaariibu adalah Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.
"Semasa (saya) bertemu Razak, dia menerima panggilan dari seseorang bernama 'Tan' yang mengugut akan mencederakan anak Razak jika beliau tidak membayar wang 'wanita' itu," kata Bala, merujuk Altantuya.
"Kemudian saya tanya kenapa tak buat laporan polis? Razak jawab tak boleh, sebab ada VVIP yang terlibat. Saya tanya lagi kenapa tak halang saja dia (Altantuya) dari masuk negara ini? Razak kata tak boleh, Altantuya ada banyak pasport," kata Bala di hadapan 3,000 hadirin pada forum 'Pendedahan: Siapa Arah Bunuh Altantuya?' di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur-Selangor (KLSCAH).
"Sebelum itu Razak cakap, kalau Altantuya ada depan rumahnya, (saya perlu) mesej beliau (dahulu). Saya hantar SMS kepada Razak memberitahunya (tentang kehadiran Altantuya).
Kemudian Razak kata 'lengahkan dia, tunggu sampai orang saya sampai'," kata Bala.
"20 minit kemudian, sebuah kereta Proton Aeroback warna merah tiba dengan seorang wanita dan dua lelaki. Wanita itu adalah Lans Korporal Rohaniza, dan dua orang lelaki itu adalah Azilah Hadri dan Sirul Azhar (Umar). Mereka semua berpakaian biasa.
Azilah berjalan ke arah saya sementara dua yang lain menunggu dalam kereta," jelas Bala.
"Azilah tanya saya dalam Bahasa Melayu: 'inikah perempuan itu', menyebabkan Altantuya tak faham apa yang kami cakap. Saya kata 'ya'. Azilah pula berkata, mereka (tiga individu berkenaan) akan bawa Altantuya pergi. Saya beritahu Altantuya bahawa dia ditahan dan perlu mengikut mereka naik kereta tersebut.
Altantuya masuk dan duduk di belakang bersama Korporal Rohaniza, manakala Azilah dan Sirul berada di depan," kata Bala.
"Sewaktu (saya) bertemu Razak dan peguam Puvanendran, Razak menerima SMS dan menunjukkan kepada kami kandungan SMS itu – "Meeting IGP at 11am, be cool". (Pada SMS itu) tertera nombor Datuk Seri Najib Razak. Maka terjawablah VVIP yang terlibat," kata Bala disambut sorakan hadirin.
"Saya dipanggil ke hotel untuk bertemu Nazim. Nazim tanya saya, kamu sayang keluarga kamukan? Saya jadi takut dengan soalan-soalan ugutan seperti itu dan memutuskan untuk membuat akuan bersumpah kedua," jelas Bala yang meninggalkan Malaysia sejak 2009 disebabkan ugutan itu.
Turut sama mengambil peluang, para peniaga yang membuka gerai jualan seperti baju dan makanan.-KD
Akhbar pada waktu itu sudahpun menimbulkan spekulasi mengenai penahanan Razak pada hari itu dan peguam berkenaan sedang membuat persediaan mengenai kemungkinan tersebut.
Balasubramaniam juga mendakwa, beliau memberitahu Razak: "Bos, tengok sini.
Apa nasihat saya pada awak? Laporan polis.
Awak sepatutnya sudah buat laporan polis."
Balasubramaniam mendakwa Razak mengupahnya untuk menghalang Alantuya, namun beliau menasihati Razak supaya membuat laporan polis.
Balasubramaniam mendakwa, Razak bagaimanapun enggan berbuat demikian kerana "seorang VVVIP terlibat".
Posted: 28 Feb 2013 06:13 AM PST
President Thein Sein on Tuesday, February 26, met Norway's prime minister as he kicked offa10-day visit to Europe aimed at forging stronger ties between Burma and the West. He will be visiting Finland, Austria, Belgium and Italy before returning home on March 8.
Hardly has he landed in Oslo, he was confronted byagroup of exiled demonstrators, made up of non-Burman ethnic and pro-democracy group, who wanted to highlight the true nature prevailing in Burma.
When asked by the BBC why they were demonstrating, one participant said that even though the government has been emphasizing internationally about its democratization process, the reality on the ground is that civil war is ongoing with no real change for the people basically. He also said that the country is stillapartly military and partly civilian administration, which they like to inform the real situation to the Norwegian public. According to the BBC, the said exiled group is to meet President Thein Sein today, where he will answer questions and clarify the government positions, probably ranging from the issues of civil war to 2008 military-privileged, Constitution.
While the Oslo exiled group is somewhat reluctant to endorse the President fully for his reform process undertakings, Democratic Voice of Burma (DVD) deputy editor-in-chief said: "This kind of visit is important in the context of political change in the country because President Thein Sein and the reformers in this current government need encouragement and support from the international community so that the hardliners who oppose transformation can be isolated."
The President Delegation spokesman, U Ye Hut told the BBC recently that no signing of Memorandum of Understanding (MOU) will be on the agenda with any country.
Yesterday, after meeting with Norway Prime Minister Jens Stoltenberg, Thein Sein said: "We wish to learn from you the manners in which we can manage these resources to the benefit of our people." He also called for more cooperation between the two countries, which are both rich in energy resources but at very different stages of development.
All in all, it seems, judging from what he had told Stoltenberg, Thein Sein generally intends to lobby for more backing for his reform process, including the field of capacity-building and economic development. But U Ye Htut, in his recent interview with the BBC, said General Soe Win will be also clarifying the government position on peace process.
Meanwhile, the offensive in Shan and Kachin States continue on and off, depending on the mood of the Burma Army, buttressing the fact that the country is ruled byadual-system of military and quasi-civilian government, with two sources of power competing with each other.
Kachin News Group reported on 25 February that fighting between the Kachin Independence Army (KIA) and Burma military broke out last weekend near Sawlaw and Chipwe in northern Kachin state. The clashes started after government troops from Infantry Battalion 29 attacked the KIA Battalion 10 on Saturday. Chipwe, located north east of the Kachin state capital Myitkyina, is home toasmall 2,000 MW dam built to supply electricity for the construction of the now officially suspended Myitsone dam.
Shan Herald Agency for News also reported recently that the government troops attacked Shan State Progressive Party/Shan State Army (SSPP/SSA) in northern Shan State, Tang Yang area and also Restoration Council of Shan State/ Shan State Army (RCSS/SSA) in Kholam area, Southern Shan State during the last two weeks of February, breaching the ceasefire agreements signed by both the SSAs. The armed clashes between the Burma Army and the two SSAs is now said to number more than 100 times. A peculiar situation foraceasefire agreement, which would have long been terminated if this happen in other countries.
But an optimistic, Minister U Aung Min, who is also vice-chairman of the government's Union Peace Working Committee, told the reporters that the clashes were the result ofamisunderstanding between low-level troopers, at the Myanmar Peace Centre on Saturday.
Aung Min confirmed the clashes between the SSPP/SSA and government troops on February 19 and 20. "It happened because ofamisunderstanding between lower level troops. No fighting occurred yesterday or today. Similar incidents might happen in other countries. This will not disrupt the peace talks," he said.
"A ceasefire isafirm foundation for peace, but we have much to discuss after ceasefires. It is difficult to hold talks while carrying weapons. Such an incident might happen between low-level troops because they are carrying weapons. This isafurther issue to discuss. We are holding talks alternatively with armed ethnic groups," Aung Min said.
Whatever the case, whether the Thein Sein headed, powerful, National Defense and Security Council (NDSC) dominated by the military or Thein Sein led Union Solidarity and Development Party (USDP) government is making the decision on the process of ongoing ethnic armed conflict is unknown. Some even speculate that the former strongman, General Than Shwe has his own shadow government in Naypyitaw and make all important decisions for Thein Sein regime.
The contributor is the General Secretary of Shan Democratic Union (SDU) – Editor
Posted: 28 Feb 2013 06:06 AM PST
IRRAWADDY> Tutu Says Burma Must Avoid 'New Apartheid'
South African peace activist Desmond Tutu speaks at the Baldwin Library in Rangoon on Feb. 27, 2013. (Photo: Kyaw Phyo Tha / The Irrawaddy)
RANGOON — South African peace activist Desmond Tutu called on Burma's leaders to embrace the idea that "freedom is cheaper than oppression" during his first visit to the country, and pressed them to end violence against Rohingyas and other minorities.Speaking on Wednesday at Rangoon's Baldwin Library, run by the US embassy, Tutu laced his talk with coded references to the ongoing racist attacks against Rohingya Muslims and wars in ethnic areas, which he said threateneda"new apartheid."
"If you want to truly be free then it must be all of you together," he told the 100-strong audience that included former political prisoners, ethnic leaders and monks who spearhead the 2007 Saffron Revolution.
"Very many people around the world have held you in their hearts, have prayed for you and continue to do so," he said. "I met former political prisoners yesterday and told them you belong to an aristocracy whose members include Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela."
Tutu,aformer bishop who playedakey role in South Africa's anti-apartheid movement in the 1980s, drew parallels with his country's experience and showed the advantages that come from embracing democracy.
"You don't have to contend with sanctions, you don't have to spend resources keeping people under lock and key, you can participate in international business and sport, you can attract tourists.
"And the most important thing … is that this isamoral universe. Right and wrong matter."
He praised Burma's President Thein Sein for the changes he has helped bring about in the country, but also stressed the "ongoing suffering of our Rohingya sisters and brothers."
"Don't say there are others that are not even allowed to travel freely," he said. "Don't say 'No, you don't belong here.' Because the world will say, 'Ah – there'sanew apartheid' and we know what the world did to South Africa's apartheid."
Abu Tahay,aRohingya community leader in the audience, said Tutu's words offeredaguide to help Burma reach its goal of peace and harmony.
"If you see people as human, our goal is quite close. If you base on nationality, our goal will become far away," he said.
Posted: 28 Feb 2013 06:02 AM PST
GUARDIAN UK. Rapes by Burmese security forces 'may cause more strife' in troubled region Francis Wade in Bangkok guardian.co.uk, Tuesday 26 February 2013
Over 90,000 Rohingya refugees have been displaced due to violence between Muslim Rohingya and Rakhine Buddhists in Burma, and many are seeking help in Bangladesh. Video from June 2012. Link to video: Rohingya refugees leave Burma to seek help in Bangladesh
Posted: 28 Feb 2013 05:52 AM PST
Posted: 28 Feb 2013 05:47 AM PST
Myanmar elite must alter their thinking on the Rohingya –
Supalak Ganjanakhundee The Nation February 27, 2013
The issue of the Rohingya and violence in Myanmar's western state of Rakhine will never be resolved unless the elite in the country adjust their attitude towards this ethnic minority and include them in the notion ofastate.
Strong reaction from lawmakers, legal experts and citizens of Myanmar againstacall foracitizenship law amendment made by Thomas Quintana, the UN's Human Rights Envoy to Myanmaraweek ago, shows the complexity and sensitivity of the issue in the country.
Quintana recommended Myanmar amend the 1982 citizenship law to end discrimination against many ethnic groups, notably the Muslim Rohingya who are in conflict with the Buddhist Rakhine and authorities.
The UN official, indeed, is not the first person to address this issue of improving the human rights record in Myanmar. Many progressive figures, rights groups and non-government organisations, have consistently urged authorities to adjust the law to fit to new circumstances inamodern world.
To their concern, the law narrowly defines only some, not all, ethnic people as citizens of Myanmar.
Article3of Chapter II of the law says "nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home fromaperiod anterior to 1185 BE, 1823 AD are Burma citizens."
The law defines Burmese as Burman and uses the term 'Burma citizen' as it was written before the name of the country was changed to Myanmar.
Myanmar registered 135 ethnic groups as its citizens, but Rohingya, whom the authorities call Bengali, were not included as an ethnic grouping in the country under the 1982 law.
The Deputy Minister for Immigration and Population Kyaw Kyaw Tun, replied toaquestion by Khin Saw Wai, an MP representing Rakhine State, duringaparliamentary session of the Lower House last week, that there were no Rohingya in Myanmar.
"There has never beenaRohingya race in Rakhine State. According to the censuses conducted in 1973 and in 1983, the country's ethnic groups include no Rohingya. That term was not mentioned either in the British gazettes," Kyaw Kyaw Tun said.
According to the census, non-ethnic citizens in Myanmar included Chinese, Indian, Pakistani, Bengali and Nepalese, he said.
Bengali, the term used by Myanmar authorities and the elite in the country, were migrants taken by the British Empire into Myanmar before it regained independence in 1948. They were made to engage in farm work.
Myanmar did not accept other historical arguments that the Muslim Rohingya had their own kingdoms before an expansion of Buddhists from the Irrawaddy valley in the 17th-18th centuries.
However, whatever they are called, Myanmar law recognises only the third generation of Bengali born to their parents who came to live in Myanmar before 1948. The rest, or those who failed to prove the connection with that generation, are regarded as illegal migrants.
Myanmar's concern for the migrant issue is based on security. Many lawmakers oppose the idea to amend the citizenship law as they fearaloose law might allow 'non-citizens' to enter the country easily. Some lawmakers even called on the legislative body to amend citizenship laws to provide for tougher punishment for illegal migrants.
Next month, President Thein Sein will receiveareport from an investigation commission set up to probe violence in the Rakhine state.
The final report, which claims to beacomprehensive one to address the causes and reasons for the conflict, would be meaningless unless it mentions the real and deep roots that have been implanted in the mindset of the upper hierarchy of the country.
Posted: 28 Feb 2013 05:17 AM PST
Aquino warns Sulu sultan over M'sia stand-off
Starr: It looks as if Philippine President Benigno Aquino is more forthcoming on the Lahad Datu crisis than Malaysian PM Najib Razak. It's indeed mind-boggling why Najib should see it fit to keep silent throughout the incident. Of course, he does haveahandful of scandals to deal with and the decision to call forageneral election. Or like he said, he wanted to see his transformation programme bearing fruit before the elections. Indeed, he has been too busy to be bothered about the armed incursion in Sabah. After all, he doesn't see any immediate threat to national security unlike the presence of Senator Nick Xenaphon from Australia on our shores.
Onyourtoes: I don't know what game the Malaysian authorities are playing anymore. At first, they want to engage and negotiate to send the intruders back. When the Philippines government sentawarship and sought to take them back, suddenly our authority wants to throw the book at these terrorists.
Doc: It looks like Aquino is acting on our PM's behalf in calling for the self-proclaimed Sulu sultan to stand down.
ForTheNation: Our leaders are smarter than you think. See, they have the Philippine president doing all the hard work for them. Malaysia Boleh for sure.
Solaris: Here we are waiting for Najib to at least say something on the issue, but the Philippines is flashing its whip - in the interest of Malaysia.
Headhunter: This is what happen when armed invaders and terrorists are treated as tourists. Imagine what would have happened had the group size been 10,000 strong. Sabah would have been declared as Philippines territory by now. Is our defence minister sleeping on the job?
Happily Writing: Our government tolerance on these invaders is amazing. Deadlines can be moved like shifting goal posts. This isasign of weak government. This isasign ofaPM who does not care about people, especially Sabahans. He only cares about his own popularity. For him, real issues can wait.
Anonymous_4056: It is only right to return Sabah back to the Sulu sultanate if it can be proved that we only lease the land from them. After all, they are Malay and Muslim too.
Paul Warren: Who hasabetter claim to Sabah? The Indians, Filipinos, Indonesians and Bangladeshis who have been given citizenship or these Sulu people? I reckon, if we have been paying rental to them then they certainly would haveafar better claim to Sabah than those who were favoured by former PM Dr Mahathir Mohamad.
Ferdtan: The group of Filipino intruders have vowed to stay and defend themselves to the end. This is what happened when Malaysian authorities are seen to be weak and indecisive. Najib is still mum on the Sabah invaders. His personal interest in the coming general election is more important than ensuring our country internal security is safe. At least Aquino (who is showing more leadership than our PM) has warned the clan leader that he must end the stand-off. Now the engaging authority, our police force under the clueless Home Minister Hishammuddin Hussein, has passed the buck to the Foreign Ministry. We should have in the first place been tough - the Defence Ministry and the army should be called in to take charge, instead of the police. The situation is now getting rather hazardous. It may end upabloody mess. Our government has clearly underestimated the resolve of these 'invaders'.
NoNoNo: This is 20th century, not 16th, not 17th and not 18th century. The Sulu sultan lost ownership of Sabah the day the British North Borneo Company took over the land. And the day Sabah opted to join Sarawak and Malaya to form Malaysia, it is owned by Malaysia. The sultan can blame his ancestors for being cheated by British North Borneo Company which no longer exist.
ACR: Perkasa chief Ibrahim Ali is not commenting on this threat to national security? How about citizenship expert and know-it-all Mahathir? He was the brains behind Project M and also on ways of strippingaperson of citizenship. Send him immediately to negotiate with the Sulus, with Ibrahim in tow.
Wanderer: This group of Filipino intruders must be fully aware that our security forces are brave enough to tackle unarmed anti-establishment protesters. Only 30 armed intruders and these "butt dancers" have no guts to move in.
Posted: 28 Feb 2013 06:01 AM PST
Kerajaan Negeri Selangor menegaskan bahawa artikel Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (Bernama) bertajuk 'Air Selangor Dalam Keadaan Kucar-kacir' yang disiarkan pada 26 Februari lalu oleh beberapa akhbar dan portal berita mengelirukan.
Posted: 28 Feb 2013 02:55 AM PST
My employment at that time was in transition. The company was being swallowed by another in what was being touted asa"friendly merger" but as we all came to realise eventually, mergers are anything but friendly.
So there I was, being transferred from the Head Office ofabank in Penang to one of its branch offices in Kedah. I remained there for aboutayear before deciding that enough was enough with looking after other people's money.
So how did this opportunity arrive? Somehow,afriend hinted to me that there wasacompany that was looking for people who was willing to work in New York. Of course, my ears pricked up. Won't yours? All sorts of ideas popped out of my head. But soon later, reality set in. Did I really have to go work inastrange land when my family is comfortable here and it was not impossible to get another job? After some hard thinking, the decision was rather easy to make: no, this adventure would not be suitable for me. Despite the turmoil, I was still contented here. Penang was, is and will be my home.
You know, when I was much younger, I used to imagine how it would be like to be even there foraholiday. All those vivid images of New York's attractions that had been playing in my mind, thanks of course to the countless movies which were set there, such as Saturday Night Fever, King Kong and many others. And memorable songs such as Frank Sinatra's New York, New York. That city isaplace where excitement never ends.
Posted: 24 Feb 2013 10:57 PM PST
Posted: 28 Feb 2013 03:57 AM PST
SOURCE> Clashes Over Land Seizures Batter the Police in Myanmar By THOMAS FULLERFebruary 27, 2013
BANGKOK — When angry villagers clashed with security forces on Tuesday over land seizures in Myanmar, the police apparently got the worst of it.
Officials andadoctor atahospital said on Wednesday that one officer had been killed and that dozens had been wounded; most of those whose injuries were severe were police officers.
The episode took place in Maubin,atownship in the Irrawaddy River delta, when the police tried to disperse villagers who were protesting the taking of land byaprivate company. It was the second time in four months thatacrackdown by the police related to land seizures turned violent. In November, dozens of monks were badly burned when police officers in riot gear used whatagroup of lawyers has said were white phosphorus incendiary devices,aweapon usually reserved for warfare.
Dr. Myint Soe, the head of the hospital in Maubin, said that of the 46 people who were treated there late Tuesday, 27 were officers. One was transferred toalarger hospital in Yangon and later died, the doctor said.
The issue of land seizures has dogged the administration of President Thein Sein, who took office in 2011 after five decades of military rule. A parliamentary committee investigating land seizures has been presented with evidence of numerous cases dating from before the transfer to civilian rule.
The protests in Maubin began last week, according to reports in the Myanmar news media, with several hundred farmers gathering at an agricultural project owned byabusinessman, U Myint Sein. Farmers say that the land was confiscated in 1996 and then sold to Mr. Myint Sein, and that they were never compensated.
"We just want our land back," said Khin Mar Win, 32,avillager. "All we have is our land."
The protests continued on Wednesday. It was not clear what had touched them off now, 17 years after the seizures, though both police officers and villagers said that tensions over the project had been worsening in recent years.
"It is an old problem, but now it has exploded," said Lt. Col. Tot Shwe of the police.
Colonel Tot Shwe would not comment on exactly how the episode on Tuesday had escalated into violence, except to say that the police had fired rubber bullets, not more lethal ammunition.
Butavideo posted on Facebook by The Voice,aprivate weekly news journal, appeared to show the police bracing foraconfrontation, withacommander instructingaline of officers in riot gear about how to use their batons.
"When you beat, strike from above, like this," the commander is heard to say. "Beat any parts you can reach."
He adds, perhaps presciently, "Keep in mind that they also have hands — so they will defend themselves."
Wai Moe contributed reporting from Maubin, Myanmar.
Because of an editing error, an earlier version of this article referred incorrectly to the amount of time that elapsed between land seizures in Myanmar and protests against those seizures. It was 17 years, not seven.
Posted: 28 Feb 2013 02:05 AM PST
Maungmaung Skw " အဖေသို့ တမ်းခြင်း "
အဖေရယ်..တခေါက်လောက်တော့ …အိပ်မက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်…လာကြည့်လှဲ့ပါဦး…အဖေ …
အဖေထားခဲ့ နှစ်တွေကကြာ …
ရာသီတွေ အလီလီပြောင်း …အဖေ့သားများ
နာမည်တလုံး နေရာတခုစီမှာ …လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်နေကြ …
အားရစရာကြီးပါ အဖေ …
ကြီးပွားချမ်းသာနေပြီ …အဖေ …
ဟိုမှာပဲ …နေကြတော့မယ်တဲ့ …အဖေ …
- မြေးတွေရပြီး …အစ်ကိုကြီးလည်း
ဟိုကအမျိုးသစ်တွေကိုပဲ …တိုးချစ်နေတော့တယ် …အဖေ …
အမေ့ကို သူက ပြုစုလိုက် …
အမေက သူ့ကို ပြုစုလိုက် …
အမေနဲ့ အတူနေပြီး …
လူပျိုကြီးပဲ လုပ်နေတယ် …အဖေ …
ဒေါ်လာတွေပိုက်ပြီး …ဝဖီးနေတယ် ..အဖေ …
ဆရာမအလုပ်နဲ့ အထာကျလို့နေတယ် …အဖေ …
စိတ်တွေပြောင်းနေပါတယ် ..အဖေ …
မင်းပိုင် စိုးပိုင် ရဲမင်းပိုင်မို့
သူကလည်း လူတိုင်းကို ကူညီ
အဆင်တွေချောနေပါတယ် …အဖေ …
-အဖေ့သား အငယ်ဆုံး ခတ်ပြုံးပြုံးကတော့
နှလုံးသားခွဲတဲ့ …ပါရဂူကြီးပါ …အဖေ …
-အမေကတော့ အဖေထားခဲ့ မြေရဲ့အပေါ်
ဆိုင်ခန်းငှားစားနေတယ် …အဖေ …
-သြော် …ကျွန်တော်လား …အဖေရှိတုန်းကအတိုင်းပါပဲ …အဖေ …
ကြုံရာကျပန်း ဥပဒေမကြောက် ဥတုမကြောက်
အခုလည်း လမ်းဘေး ဈေးရောင်းနေပါတယ် …အဖေ …
ကံကြမ္မာလည်း မျက်နှာသာ မရလို့
နှဲသမားလို ပိန်လိုက် ဖေါင်းလိုက်
ရရ စားစားပါပဲ …အဖေ …
-မရှိ မရှား နေတဲ့ကြားက
မွေးချင်းများအတွက်လည်း ဝတ္တရားမပျက်ခဲ့ပါဘူး …အဖေ …
-ချယ်နယ်လိုင်းပေါင်း စုံလင်လှတဲ့ လောကဒဏ်ကြားမှာ
အဖေ့သားပဲ …ဘယ်အရှုံးပေးပါ့မလဲ ..အဖေ ..
ဘာမှ လုပ်စားလို့ မရ သူ့ကိုပြုစုရ
နောက်ဆုံးအချိန်အထိ အထူး ကုခဲ့ရ
အထူး ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်…အဖေ …
-စီးပွားလည်း ပျက် လူမှုပျက်
တာဝန်တွေလည်း ပျက်ခဲ့ရတယ် …အဖေ …
အကုန် မနိုင်ပါဘူး …အဖေ …
-သူတို့ကျေးဇူး ကြီးလှပါတယ် …အဖေ …
ဒါပေမဲ့ အဖေ ရယ် …
ကျွန်တော်ကိုက ဥာဏ်တုန်း အသုံးမကျခဲ့ပုံများ
ကိုယ်ရှာတဲ့စီးပွား ကိုယ့်အတွက် တပြား ချန်မထားခဲ့
ရသမျှ အကုန် အမေ့ဆီ ပုံခဲ့မိ
လိမ်မာတယ်လို့ ခေါ်မှာလား …အဖေ …
ခုချိန်ဆို တန်ဘိုးပွား များနေလောက်ပြီ …အဖေ …
-ဒါမျိုးတွေ မလုပ်မိခဲ့ မိုက်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော်
ကိုယ့် ကိုယ် ကိုပဲ အပြစ်တင်မိတယ် …အဖေ …
ရှိရင် ရွှေမျိုး မရှိခိုးနိုး ချေး ငှား နိုးနဲ့
တမျိုး တဘာသာ ပြောင်းကြပါတယ် ..အဖေ …
မင်းအလုပ်အတွက် မှန်း လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ် …အဖေ …
-မိသားစု စား ဝတ် နေ ရေး အပူအပင်ဝေးစေဖို့
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်တွေး ကဖေးဆိုင်လေးလုပ်မယ်လို့ ရွေးခဲ့မိတယ် ..အဖေ …
ညီတွေမိန်းမယူပြီး နေဖို့ အခန်း
ကျွန်တော် အပြီးမသပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ …အဖေ …
ဘီးဖာဆိုင်လေးတောင် လုပ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး …အဖေ …
-တစ်အိမ်လုံးမှာ နေလို့ရပြီး နေကြပြီးနောက်
ကျေးဇူးရှင်တွေ ဖြစ်သွားကြတယ် …အဖေ …
ကျွန်တော် နေခွင့် မရခဲ့ပါဘူး …အဖေ …
-ကျွန်တော်မိုက်လို့ ကျွန်တော် ခံခဲ့ရတာပေါ့ …အဖေ …
ပေးခဲ့ ကျွေးခဲ့ ဖို့ခဲ့ ပါတယ် …အဖေ …
-လမ်းဘေးရှာစား အောက်တန်းစား လို့
ကွယ်ရာ ဘေးလူ ပြောတတ်သူတွေ ရှိကြပေမဲ့
ကျွန်တော်ကျွေးတာ အားလုံးစားခဲ့ကြပါတယ် …အဖေ …
ကျွန်တော့်ဆီမှာ အားလုံး လာစားခဲ့ကြပါတယ် …အဖေ …
-တောခိုသွားတဲ့ အဖေ့သား အဖမ်းခံထားရလို့
ကျွန်တော်ရှင်းလို့ ကယ်ခဲ့ရတယ် …အဖေ …
-အစ်ကိုကြီး နိုင်ငံ ကျွန်တော်လိုက်သွား
စုမိသမျှ အရင်းအနှီး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းပြီး
အိမ်ပြန်ခရီး နှင်ခဲ့ရတယ် …အဖေ …
-ဒီကနေ့ ဒီကနေ့ တော့လေ
အဖေ့ သွေးသား ကျွန်တော့် သားချင်းများက
တချို့က ကျွန်တော့်ကို ဆဲ
ပစ်ပယ်လိုက်ကြပြီ …အဖေ …
-ကျွန်တော့်အပြစ်က ငွေမရှိတာပါ …အဖေ …
-ကျွန်တော့်အပြစ်က ဆင်းရဲတာပါ …အဖေ …
-ကျွန်တော့်အပြစ်က စော်ကားတာမှန်သမျှ ခေါင်းငုံမခံတာပါပဲ …အဖေ …
-ကျွန်တော် ပေးခဲ့ ကျွေးခဲ့တာတွေက
တန်ဘိုးမရှိဘူး ထင်ပါရဲ့ …အဖေ …
-သူတို့အလုပ် လုပ်ပေးနေရင်း စားမိသောက်မိတာတွေက ပြောမကုန်တဲ့ ကျေးဇူးတွေတဲ့ …အဖေ …
တာဝန် နဲ့ ဝတ္တရား မကွဲပြားပဲ
ကျွန်တော် အားနာလိုက်တာ …အဖေ …
ကျွန်တော် အားလုံး မှားတယ် …အဖေ…
မိတ်ပျက်နေကြပြီ …အဖေ …
အဖေထားခဲ့ အဖေ့ ဂုဏ်သိက္ခာ
အဖေထားခဲ့ အဖေ့ အမည်ကောင်း
အဖေထားခဲ့ အဖေ့ မျိုးရိုးကောင်း
ညှိုးနွမ်းအောင် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ..အဖေ ..
-အဖေ.သားစစ်စစ် အဖေညွှန်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင်
အားနဲသူအတွက်တိုက်ပွဲဝင် မှားသူတွေကို ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့တာတွေကြောင့်
အများစုက လေးစားကြပါတယ် …အဖေ …
အများစုက အားကိုးကြပါတယ် …အဖေ …
မင်းအဖေမွေးထား သားတွေ များလှ
မင်းတစ်ယောက်နဲ့ တန်ပါတယ် တဲ့ …အဖေ …
သူတို့များ စကားအမှား ပြောသွားလေသလား
ကျွန်တော် မသိနိုင်တော့ပါဘူး …အဖေ …
အပြင် ထရံတွေ အတွင်းကာလို့
ပျော်အောင်နေ နေရတယ် …အဖေ …
ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်ကလေး ပျောက်ပျက်မသွားအောင်လို့လေ…….
အိပ်မက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် တခေါက်လောက်တော့ လာခဲ့စေချင်ပါတယ်……….
ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း အနှစ်(၂၀)ပြည့်က ရေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
Posted: 28 Feb 2013 08:24 AM PST
"Pegawai kami sudah berada di sana namun kami masih belum mendapat sebarang maklumat," katanya. -mk
Posted: 28 Feb 2013 01:14 AM PST
Umno-BN 'terlupa' bahawa perkara yang menyumbang kepada negara muflis adalah pengurusan tidak telus, pembaziran melampau dan subsidi yang terlalu besar kepada kroni mereka.
"Sebagai contoh di Kedah, kerajaan PR menurunkan cukai tanah dan dapat meningkatkan hasil balak daripada pentadbiran yang telus.
"Begitu juga di Selangor, agenda Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) seperti Skim Mesra Usia Emas (SMUE), Tawas dan sebagainnya yang dilaksanakan untuk rakyat tidak menjadikan negeri itu muflis.
Bahkan kalau kita tengok, simpanan tunai di Selangor juga meningkat walaupun pelbagai program kebajikan dilaksanakan. Justeru, tidak timbul soal bangkrup," ujarnya apabila ditemui di sini.
"Sekiranya kerajaan berupaya membersihkan amalan rasuah dan kronisme yang diamalkan dalam pentadbiran negara, maka ekonomi dapat berkembang dengan baik, sekaligus menjadi jaminan untuk mengelakkan negara muflis," jelasnya.
"Saya tidak nampak bagaimana mereka (Umno-BN) boleh mengubah sikap mereka seperti yang dijanjikan kerana kita lihat sendiri program transformasi yang diwar-warkan juga gagal.
"Dari segi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa mereka bukanlah pemerintah yang baik.
"Jadi, rakyat sudah cukup jelas bahawa kerajaan sekarang perlu digantikan supaya Pakatan dapat tunjukkan satu formula dan pendekatan lebih baik, murah, kompetetif untuk mengurus tadbir negara," katanya. -selangorku
Posted: 27 Feb 2013 10:47 PM PST
It was with much sadness when I saw in my Facebook News Feed that my former student Dr.Justine Bhar-Amato's father Eugene Joseph Amato, 80, of Wayne, N.J., passed away passed away on Monday, Feb. 25, 2013, surrounded by his loving family.
I wish to express my deeepest condolences to Justine and the Amato family. I am indeed saddened by the news because the late Mr. Amato has leftavacuum in this world and in our hearts that cannot be filled. He was such an inspiring man who spoke honestly from his heart and sincerely with his eyes. He inspired Justine and many who knew him including myself to be more than who we are and to chase our dreams to make them reality.
The first time I met him was during the first Parent-Teacher Consultation when Justine was in Year 10. Then, Justine was in my Economics class in Uplands International School. I remember how Mr Amato commended me for the high standard of work I expected from the class, the type of assignments and research projects they had to undertake even at the age of 15 and the way I motivated the kids. That was so validating!
At that time, Justine was just an ordinary student but what caught my attention was her insatiable desire to learn and to know more. Her cohort is one of the best I have ever taught in Uplands. I challenged them with so much homework and unbelievably, they complied and tried their best. Justine even wrotea16 verse poem on Demand and Supply which I have kept till today. She went on to score straight As in her 'O' levels in Uplands and 'A' levels in UK and her medical degree at UCL. Currently, Dr. Justine Bhar-Amato isaclinical research associate at UCL and the Heart Hospital, UCLH Foundation Trust. She holdsaclinical research training fellowship awarded by Heart Research UK. She is doingaPhD in Autonomic Modulation in Brugada Syndrome. You can read her papers here and HERE.
Justine's accomplishment is testimony of the wonderful parenting from her parents, both of whom I respect greatly. Her mother, Dato' Rhina Bhar, is another fantastic person who was there for me atavery critical experience of my life. Justine is not only big in brains but also in her heart, always reaching out to me via FB if she knew I was unwell or down. I am so blessed to have had the opportunity to teach Justine and to see her grow intoafine young doctor and to know both her parents.
Despite my few interactions with Mr. Amato - the last being atacelebration dinner at Mr. Bhar's home to celebrate the graduation of Shai and Natasha from law school, Dheeraj from medical school in 2005, I am not exaggerating when I say each left an indelible mark on me because of the observations, advice, wisdom and experience he shared so freely and humbly.
My son, Jonathan, was only5when he met Mr. Amato in 1994 atadinner treat for my family in appreciation for teaching and guiding Justine. Jon remembers Mr. Amato clearly when I broke the sad news to him and even asked me if he had curly hair! That is the sort of legacy Mr. Amato has left behind. May his children and grandchildren continue to impart his ideals, principles and zest for life to those with whom they come into contact. May Eugene Joseph Amato rest in peace, always.
Family and friends are welcome for visitation hours on Thursday from4to 8 p.m. at Farmer Funeral Home, 45 Roseland Ave., Roseland, N.J. 07068. Funeral services will be held on Friday at 10 a.m. in the funeral home. Interment will be at Mr. Olivet Cemetery, Bloomfield, N.J. Condolences and memories can be shared at THIS LINK.
Eugene was born in Orange, N.J., and raised in Bloomfield, N.J. He graduated from Bloomfield High School and went on to receive his bachelor's degree from Fordham University, graduating in 1954. He also heldamaster's degree in business administration from San Francisco's Golden Gate University. He served in the U.S. Armed Services from 1954 to 1956, receivingacommendation from the U.S. Third Army for meritorious military service.
He then beganacareer as an engineer and laterasenior executive in the early days of the technology industry in Silicon Valley, working for General Instrument, Fairchild Semiconductor, and National Semiconductor. During these years, he managed manufacturing facilities inaseries of locations outside the U.S., including Taiwan, the Philippines, Mexico, Brazil, Indonesia, Thailand, and Malaysia.
Takingaleave of absence from National Semiconductor, he served from 1979 to 1980 under President Jimmy Carter as assistant to the secretary of transportation and as deputy administrator for the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). During his tenure at NHTSA, he conceived of and published the government-sponsored Car Book,aconsumer guide to purchasing automobiles, now in its 32nd year of publication.
After his career in the semiconductor industry, he served as chief executive officer foranumber of start-up businesses, including San Francisco-based Grocery Express.
He was the beloved son of the late James Amato and Catherine (Cerami) Amato; devoted father of Eugene Amato and his wife, Carol; Joseph Amato and his wife, Lisa, and Justine Bhar-Amato; and cherished grandfather of Christopher, Alyse, Elizabeth and Joseph Jr. He was predeceased by his siblings.
In lieu of flowers, donations may be made in his memory to the Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, Grand Central Station, P.O. Box 4777, New York, N.Y. 10163-4777, or at THIS LINK.
Posted: 27 Feb 2013 10:01 PM PST
Rashly Nay Win's status.February 20
Now he is fanning the trouble of Tharketa to spread .
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ထောင်တွေကျတဲ့သူကျ ၊ နယ်စပ်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေထွက်သူထွက် လုပ်ခဲ့ကြရင်း သမိုင်းတစ်ခုကို အရင်းအနှီးကြီးကြီး ပေးဆပ်ခဲ့ကြရတယ် ၊ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဟာ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် ထောက်လှမ်းရေးတပ်တွေကြောင့်ဆိုတာ မီလိုက်သူတွေသိလိုက်ကြတယ် ။ မမီတဲ့သူတွေကလည်း ကြားဘူးခဲ့ကြတယ် ။
ဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Eleven Media က CEO သန်းထွဋ်အောင်ကတော့ ကိုယ်နဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေကို နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကိုမှ အရှက်မရှိ ကပ်ရပ်ပေါင်းပြီး ဂျာနယ်ထုတ်တယ် ၊ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးလုပ်နေတယ် ၊ ဒီလိုကောင်မျိုးက သစ္စာတွေ ၊သမိုင်းတွေ လာပြီးပြောနေတာ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်နေသလိုပါဘဲ ။သိပ်စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းတယ် ၊ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိရင် အေးအေးနေပါ ၊ ဒါနောက်ဆုံးသတိပေးတာပါဘဲ ။
မင်းဖေါ်ကောင်လုပ်လို့ ထောင်ထဲဝင်သွားရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိတော့ဘူး လို့ထင်နေလား သန်းထွဋ်အောင် …. ဟား…..ဟား….ဟား……ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ မင်းသိနေလောက်ပါပြီ….ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေပါမောင်ရင်….။
Posted: 27 Feb 2013 09:20 PM PST
ရခိုင်ပြည် ကျွန်သက် အနှစ် (၂၂၆) နှစ် ကြာသောအခါ
မြန်မာကျူးကျော်စစ်ကို (၄၅) ရက်ကြာကြာ ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် (၁၇၈၄) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နိတွင် ရခိုင်ပြည်ကြီးနှင့်တကွ ရုပ်ရှင်တော်မဟာမြတ်မုနီ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်။
မြန်မာများသည် ရခိုင့်ရွှေနန်းတော်၊ ပိဋကတ်တိုက်တော်၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကြီး (၃၀)၊ အငယ် (၃၀၀၀) ကျော်ကို မီးလျှို့ဖျက်ဆီးခသည်။
ရခိုင်တပြည်လုံး ဖူးဖူးရောင်သော လူသီကောင်များဖြင့် ပြန့်ကြဲလျှက်ဟိုသည်။
နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) ကျော် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် နီထိုင်လာခသော ရခိုင်နိုင်ငံတော်၌ တိုင်းသားပြည်သူများမှာ ကူမည့်သူမဟိ လွတ်ရာကို ထွက်ပြီးကြရသည်။
မြန်မာများသည် ပုခက်တွင်းသား အချေသူငယ်များကိုမချန်သတ်ဖြတ်သည်။
ရခိုင်မှတ်တမ်း၌ "အချေသူငယ်၊ အစိတ်ကေရို့၊ ပြုံးရယ်ရွှင်ဘိ၊ မိမသိကို၊ မွီးမိထံမှ၊ ယူပြီးမှလျှင်၊ လက်ကိုကိုင်မြှောက်၊ ကောင်းခင်ရောက်က၊ အောက်မှတဖန်၊ ဓါးကိုလှန်၍၊ ခံပြန်ပြုခါ၊ မြှောက်လီမှာလျှင်၊ ကျလာမလွဲ၊ နှစ်စိပ်ကွဲ၍၊ ရဲရဲသွီးစက်၊ အအူထွက်၏။
တချက်မြီ၌၊ လှံကိုစိုက်၍၊ လံလိုက်တုံလျှင်၊ ရင်ကဝင်၏" ဟူ၍ တွိရပါသည်။
အသတ်ခံခရသော ရခိုင်သားများကို "တင်းဝပန်းခိုင်၊ တမြိုင်မြိုင်၊ ရခိုင်လူအလောင်း" ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခသည်။ ဂဏန်းသင်္ချာအလို (၇) သန်းကျော်သည်။
မြန်မာများသတ်ဖြတ်ခသည်ကို အစွဲပြု၍ ဂေါင်းပုံပြင် (မြောက်ဦး)၊ လူသတ်ဂျိုင် (မြောက်ဦး)၊ ရီတက်ရီကျသောအခါ သောင်ပြင်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချိုင်နှောင်၍ သတ်ခသောကြောင့် ရီအကျတွင် ဖြူနီသောအလောင်းကောင်များကို မြင်ရသောကြောင့် ပေါက်ဖဲ့ရွာ (မန်အောင်၊) လက်များကိုဖြစ်၍ တောင်နှယ်ပုံထားသောကြောင့် လက်ပုံတောင် (မာန်အောင်)၊ ရီကန်တွင် လူအပြည့်သတ်၍ ပုံထားသောကြောင့် သီဘေးကန် (ပေါက်တော)၊ အချေငယ်များကို ရီကျရီတက်ချိန်တွင် ခြံလှောင်၍သတ်ခသောကြောင့် ခြံလှောင်ချောင်း (မာန်အောင်)၊ ခြံပြင် (မောင်တော)၊ သွီးချောင် (တောင်ကုတ်)၊ လူ့အသားတစ်များကို ခွတ်ဖြတ်၍ပုံထားသောကြောင့် အသားပုံရွာ (ပုဏ္ဏားကျွန်း) စသည့်စသည့်ဖြင့် နာမတွင်သည်။
နှစ်ပေါင်း (၄၀) လုံးလုံး ရခိုင်အမျိုးတုံးလားအောင် သတ်ဖြတ်ခသည်။ မာန်အောင်မြို့ တမြို့တည်းတွင် အသတ်ခံခရသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်မှာ "လူငယ်တသောင်း၊ လူကြီးပေါင်းမူ၊ သျှစ်သောင်းအစွန်း၊ တသိန်းမှန်း၏၊ မယွန်းထိုခါ၊ သီကုန်ပါ၏၊ သိမ်းကာယူက၊ ပြည်အင်းဝသို့၊ ပါရလီငြား၊ လူယောက်ျားနှင့်၊ မပြားမှန်ထ၊ လူမိန်းမကို၊ ရွီကြလီသော်၊ နှစ်သိန်းကျော်၏၊ ကြားသော်မြင်ခါ၊ ကြောက်ဖွယ်သာတည်း" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
(၁၈၂၆) ခုနှစ် ဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်ရသောအခါ မြန်မာလက်အောက် နှစ် (၄၀) ငရဲစခန်းသည် တခန်းရပ်ခသည်။
ကျူးကျော်သူမြန်မာများကိုမောင်းထုတ်၍ အင်္ဂလိပ်ရို့က တဖန်အုပ်ချုပ်သည်။ သို့သော်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ လူမကျန်တော့ပေ။
ရခိုင်နိုင်ငံတော်တခုလုံးသည် သုသာန်တစပြင်ပမာ တောကြီးမျက်မဲဖြစ်နီလီတော့သည်။
အင်္ဂလိပ်အကာအကွယ်ကြောင့် သီကံမရောက်သတ်မပျောက်ပဲ ရခိုင်တချို့ ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ကျန်ရစ်သည်။
ထိုသူများထဲမှ (၅) သောင်းခန်ကို ပြန်ခေါ်ယူ၍ ရခိုင်ပြည်၌ ပြန်လည်နီရာချထားပီးသည်။ သခင်ပြောင်းသော ကျွန်ဘဝသည်ပင် ရခိုင်ရို့အဖို့ ကံထူးကံမြတ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာများ၏ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုဖြင့် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခရသည်မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်ဘဝတဖြစ်လဲကိုပင် ရခိုင်ရို့က "ခေတ်ကောင်းခါကယင်" ဟူ၍ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
မြန်မာလက်အောက် နှစ် (၄၀) လုံးလုံး ဒုက္ခရောက်နီသော ရခိုင်သားများသည် ရီနှစ်သားတုံးဆွဲမိသကဲ့သို့ အသက်လျှူဖြောင့်ခရသည်။
တနည်းဆိုရလျှင် ဗြိတိသျှရို့၏အကာအကွယ်ကို ရခိုင်ရို့ရသည်။
လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ဟိသဖြင့် အတော်အသင့် ချမ်းသာလာကြသည်။
ခေတ်ပညာကိုလည်း သင်ကြားခွင့်ရလာသည်။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခသည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် ရာထူးကြီးများကို ရခိုင်သားများထမ်းဆောင်နိုင်ခသည်ဟု အိုင်စီအက်စ် ဦးကျော်မင်းက မှတ်တမ်းရွီးဖူးခသည်။
ရခိုင်ကျွန်သက် (၁၀၁) နှစ် တင်းတင်းပြည့်သောနိ (၁၈၈၆) ခု၊ ဇွန်နဝါရီလ (၁) ရက်နိတွင် ဗမာတပြည်လုံး အင်္ဂလိပ်လက်အတွင်းသို့ ကျရောက်ရသည်။
ရခိုင့်အမျိုးသားဆရာတော်ဥတ္တမသည် မြန်မာပြည်၌ လွတ်လပ်ရေးမျိုးစိကို ဦးစွာပထမအစချသည်။ ဝံသာနုစိတ်ဓါတ်ကို နိူးဆွပီးသည်။
အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ကျ အဖမ်းခံခရသည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရန် ရခိုင့်ဂေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာများနှင့်တန်းတူ ကြိုးပမ်းခသည်။
မင်းသားကြီးရွှီးဘန်းသည် အင်္ဂလိပ်ကို စတင်တော်လှန်ရန်ကြိုးပန်းသည်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ရခိုင်က အယင်တော်လှန်သည်။ (၁၉၄၅) ခု၊ မတ်လ (၂၇) ရက်နိ မြန်မာက ဂျပန်ကို တော်လှန်သောအခါ ရခိုင့်ပြည်တွင် ဂျပန်မဟိပါယာ။
ရခိုင်ရို့သည် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး တော်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗမာတပ်မတော်မှ ရိုင်ဖယ်တလက် အကူအညီမယူပါ။
ဂျပန်အဆုတ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ရခိုင်ပြည်သို့ရောက်လာသည်။
ဦးစိန္တာကျင်းပသော ကြာအင်းတောင်ညီလာခံကို တက်ဖြစ်သည်။
အလံနီပါတီမှ ဦးအောင်သန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲသည်။
စစ်တွေကြက်ကိုင်းတန်တွင် "ရခိုင်တကျပ်၊ ဗမာတကျပ်၊ သျှမ်းတကျပ်၊ ဗမာတကျပ်" တရားကိုဟောသည်။ စည်းရုံး၍မရသဖြင့် "မြွီပွီးနှင့် ရခိုင်ကိုတွိလျှင် ရခိုင်ကို အယင်သတ်ရမည်" ဟု မြန်မာပြည်တွင် ဝါဒဖြန့်သည်။
သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့များကလည်း ဆရာတော်ဦးပညာသီဟအား ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရလျှင် ရခိုင်ကိုလည်း လွတ်လပ်ရေးပီးမည်။
မန္တလေးမဟာမုနိကိုလည်း ပြန်ပီးမည်ဟု လိမ်သည်။ ညာဏ်တုံးသော ရခိုင်ဂေါင်းဆောင်များက မြန်မာမကျက်လှည့်ကို ယုံကြသည်။
တိုင်းရင်းသားများကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်၍ ရယူခသော လွတ်လပ်ရေးဖြစ်သည်။ ဗိုက်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသော ရခိုင်တကျပ်-မွန်တကျပ်။
တိုင်းရင်းသားများ တကျပ်တကျပ်စီရသောအခါ မြန်မာ (၇) ကျပ် အိပ်ဝင်သပိတ်ဝင် ပင့်သကူအချောင်ရသည်။
(ယခု (DVB) အသံလွှင့်ဌာနတွင် မြန်မာအသံက တရက်ကို (၄၅) မိနိရသောအခါ တိုင်းရင်းသားတမျိုးစီက တပတ်လုံးမှ (၁၅) မိနိရသည့် ဥပမာနှင့် အလားတူသည်။ အယ်ဒီတာမှတ်ချက်။)
တနည်းပြောရလျှင် ရခိုင်ရို့သည် မြန်မာများအောက် နောက်တကြိမ် ကျွန်ဇာတ်အသွင်းခံလိုက်ရသည်။
မြန်မာရို့သည် သမိုင်းစဉ်တလျှောက် ရခိုင်လူမျိုးအပေါ် မည်သည့်အခါမှ ကောင်းကျိုးမပီးခပါ။ ဗိုလ်ရန်အောင်ဂေါင်းဆောင်သော ဗမာ့တပ်မတော်သည် မောင်ဝိုင်းတပ်အပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၁၆) နှစ်အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်၌ ပထမဆုံးခြီချလာသည်။ (၁၉၄၂) ခုတွင် ကုလားရန်ကိုကြောက်၍ထွက်ပြီးလာသော ရခိုင် (၄၀၀) ကျော်ကို ဗိုလ်ရန်အောင်သည် အကူအညီမပီးဘဲ သင်္ဘောကိုဖောက်၍ လုပ်ကြံလိုက်သည်။
လွတ်လပ်သောမြန်မာပြည်တွင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်ဟုဆိုသည်။
ပါလီမန်တွင် ရခိုင်သားများ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ တင်ပြခွင့်ကားရသည်။
သို့သော် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကား မရ၊ (၁၉၅၂) ခုနှစ်တွင် တောပန်ဇင်း၊ အခစား (ကျော်တော်)၊ မကျည်းကုန်း (မာန်အောင်) စသောရွာများကို ရွာလုံးကျွတ်သတ်ဖြစ်ပြီး ဦးနုက ရခိုင်သားများကို ဒီမိုကရေစီနှင့်မိတ်ဆက်ပီးသည်။
ဦးနု၏ဒီမိုကရေစီသည် ရခိုင်သားများအဖို့ ခါးသီးလှသည်။ မြောက်ဦးမြို့နန်းရာကုန်းထက်တွင် ရခိုင်မျိုးချစ်ထွန်းလှအောင်ကို မြန်မာစစ်တပ်က ကျားထိုးသတ်ပစ်လိုက်သည်။
ရခိုင်နိုင်ငံတော်သည် ဂျပန်ထက် အဆပေါင်းများစွာဆိုးသော မြန်မာလက်အောက်သို့ အဖန်ကျရောက်ရသည်။
(၁၉၅၈) ခုနှစ်တွင် ဖဆပလနှစ်ခြမ်းကွဲသည်။ ပြည်နယ်ပြဿနာပေါ်လာသည်။
ဦးနုဂေါင်းဆောင်သော တည်မြဲဖဆလက သူ့ပါတီကိုမဲပီးလျှင် ရခိုင်ကိုပြည်နယ်ပီးမည်ဟုလိမ်သည်။ သန့်ယှင်းဖဆပလဘဆွေက "ပြည်နယ်မပေးနိုင်ဘူး။
ခင်ဗျားတို့ကို ကျန်တဲ့ဟာကိုဘဲ ပေးနိုင်မည်" ဟု ပြောင်တိုက်စိတ်ခေါ်သည်။
ရခိုင်သားများသည် ပြညနယ်အဆင့်ကိုပင် မြန်မာများထံမှ လက်ဖြန့်တောင်းခံရသော သူတောင်းစားဘဝကျရောက်ရတော့သည်။
ပြည်နယ်လိုချင်သော ရခိုင်သားများသည် မျက်စိမှိတ်၍ ရတညမဲအပါအဝင် အမတ်နီရာ (၉) ခုစလုံးကို ဦးနုအားပုံအောလိုက်သည်။
(၁၉၆၀) ပြည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလရွီးကောက်ပွဲတွင် ဦးနုပါတီအနိုင်ရသည်။
သို့သော် ရခိုင်သားများပြည်နယ်မရ။ ဒုတိယံပိအလိမ်ခံရသည်။ ရခိုင်သားများမှာ အရှက်လည်းရ ဝမ်းလည်းကြီးရသည်။ "ဦးနုကတိတည်ပါစီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အယင်ပီး။" ဟူ၍သာ ငယ်သံပါအောင်အော်၍ လိုင်ခြောင်းကွဲသည်။
ရခိုင်က ပြည်နယ်တောင်း၊ သျှမ်းက ဖယ်ဒရယ်မူတင်လာသောအခါ ဦးနုသည် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပေ။
နေဝင်းကို အာဏာလွှဲအပ်လိုက်ရသည်။ မြန်မာများ၏ပင်ကိုယ်ဘီလူးရုပ်ကို ပြရတော့သည်။
အောင်ဆန်း "တကျပ်" ကို နေဝင်းက လုယူလားခသည်။ ထိုအခါ မြန်မာက (၁၄) ကျပ်ရ၍ တိုင်းရင်းသားများမှာ ဝလုံးကွင်းသည်။
(၁၉၆၇) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်ဥပုသ်နိ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်သား (၃၀၀) ကျော်ကို နေဝင်းသတ်ပစ်လိုက်သည်။ "ဘားဗူဟိယင့်၊ ဆန်ဟိယင့်၊ ဒိုင်းကျီဟိယင့် ရီယိဟင့်" ဘဝင်မြင့်သောရခိုင်သား။
နေဝင်းလက်အောက် ထမင်းငတ်၍ သူတောင်းစားဖြစ်သည်။ ("ယခီး" ဟု အခေါ်ခံရသည်။
မြန်မာ (ဗချီး) နှင့် ရခိုင် (ယခီး) အသားစားအရီစားဖြစ်ကတ်ရသည်။)
မြဆန်စက်ရှိတွင် ရခိုင်သားများ ခွီးသီဝက်သီ သီကတ်ရသည်။
"မသီပါသိမ့်၊ အသက်ဟိသိမ့်ရေ" ဆိုကေလည်း မလွတ်။
အရှင်လတ်လတ် မြီမြှုပ်ခံရသည်။ မဆလလက်အောက် ရခိုင်တမျိုးသားလုံး စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ပျက်စီး၍ ရခိုင်လူညွန့်တုံးသည်။
ရခိုင်လူမျိုးသည် သမိုင်းစဉ်ဆက် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ရာဇဝင်နှင့်လာသော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည်။ မြန်မာရို့သည် မွန်ကတဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။
မြန်မာများ အရေးကြီးရဟန်းကိုးကွယ်နီချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော် ဗဒ္ဓဘာသာ အမြစ်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်။
ကုလားတန်မြစ်သည် အင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဆင်းသည်။ ရခိုင်နှင့် မြန်မာသည် မြီလည်းမတူ၊ ရီလည်းမတူ၊ လူလည်းခြားသည်။
(၈၈) အရေးအခင်းဖြစ်၍ ဗမာတပြည်လုံး ကျကျက်ရိုက်သောအခါတွင် ရခိုင်ပြည်ကိုလည်း ကူးစက်လာသည်။
ပြီးယှောင်ခရသော ရခိုင်သားများမှာ ဘောက်သာလိုက်။ ထောင်ကျသားလည်း မကန်။ ကြိုးပီးအသတ်ခံရသူမနည်း။
(၁၉၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပါတီ (ALD) က အမတ် (၁၁) နီရာရသည်။
အဖိုးဦးသာထွန်း ထောင်ထဲ၌အသတ်ခံရသည်။ များမကြာ၊ ရခိုင်ပါတီ အဖြိုခံရသည်။ ရခိုင်ဂေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချသည်။
(NLD) ပါတီက မဲဆွယ်တရားဟောနိုင်ချိန်တွင် ရခိုင်သားမျာမှာ ယေင်၍ပင် ဟ၍မရ။
ပြောမိဆိုမိလျှင် မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ အမြင်ကျဉ်းသူများအဖြစ် တံဆိပ်အရိုက်ခံရသည်။
ကျဉ်းမြောင်းသော မြန်မာလူမျိုးငယ်ဝါဒအောက်တွင် ရခိုင်သားများ၏ဘဝ စုန်းစုန်းမြုတ်ရပါတော့သည်။
(၁၉၇၄) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို နေဝင်းက (၉၉) ဒဿမ (၇) ရာနှုန်း ထောက်ခံမှုရသည်ဟုလိမ်၍ အတည်ပြုခသည်။ အခုလည်း လိမ်လည်၍ အကြာခင်အတည်ပြုတော့မည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက "မြွီပွီးနှင့် ရခိုင်ကိုတွိလျှင် ရခိုင်ကိုအယင်သတ်ရမည်" ဟုပြောသည်။
(၂၀၁၀) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နိတွင် ရခိုင်ကျွန်သက် အနှစ် (၂၂ ၆) တင်းတင်းပြည့်သည်။ ရခိုင်ပညာတတ်များစဉ်စားပါ။ ပညာမတတ်သူများလည်း စဉ်းစားပါ။
ယခုတဖန် ရခိုင့်ကံကြမ္မာသည် အကျွန်ုပ်ရို့၏ ဂေါင်းထက်သို့ ကျရောက်လက်ပြီ။
ရခိုင့်ပညာတတ်များ၊ ပညာဟိများ၊ ပညာသျှင်များ၊ ပညာမဲ့များအားလုံး သတိထားကြပါ။ မြန်မာရို့ဖော်စပ်သော ဝမ်းနှုတ်ဆီးအမျိုးမျိုးကို သောက်ဖူးခပါပြီ။
ရခိုင်ရို့၏ တခုတည်းသော အန္တိမပန်းတိုင်သည်သည်ကား ပဇာဖြစ်ပါသနည်း။
သမိုင်းကြောင်းကိုပြောလျှင် ပဒေသရာဇ်အချင်းချင်း စစ်ခင်းကတ်သည်ဟူ၍သာ စကားလှဆိုသည်။ သို့သော် မြန်မာရို့သည် ပဒေသရာဇ်များသိမ်းယူခသောနယ်ပြီများကို အပိုင်ရလိုသည်။
ကမ္ဘာမကျေ မသာမြေ ကြွေးကြာ်၍ ဘုရင့်နောင်၊ ကျန်စစ်သား၊ အလောင်းဘုရားစသည်ဖြင့် အခြောက်တိုက် ရန်စောင်နီတတ်သည်။ ပညာပီးရဖို့ အချိန်ရောက်နီပါဗျယ်။
ကနိအချိန်၌ ရခိုင်သားများသည် မည်သို့မျှ မတုံ့ပြန်သိမ့်သော်လည်း မုန်တိုင်းသည် ကြိမ်းဝါးဖို့အတွက် အားယူတာစူလျှက်ဟိသည်။
ပြည်ပရောက် ရခိုင်မျိုးချစ် လူငယ်များ အတွက်
(၂၀၁၁) ခုနှစ် သြာဂုတ် (၁၀) ရက် အင်္ဂါ နိ။
( ပြည်တွင်ပြည်ပ နီထိုင်ရေ အဖရခိုင်မျိုးချစ်သားရို့အတွက် ဤစာစောင်ကို ပြန်လှည်တင်ပီးလိုက်ပါယင်)
Posted: 27 Feb 2013 08:22 PM PST
U Thein Sein, please do not try to divert attention by creating another Anti-Muslim Riots.
မစုစုနွေး ပြောပြတဲ့ မအူပင်မြို့နယ် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ရပ်မှန် –
ရွာသူရွာသားအများစုဟာ ဆင်းရဲတွင်းနက်သထက် နက်လာတယ် ဆိုတာထက်၊ ငတ်သထက် ငတ် လာကြတာမို့ မိမိတို့ရွာအနီးက ဒီမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေနဲ့ အသက်ဆက်ကြဖို့ဟာ ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ တစ်ခု တည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျမတို့ဒီနေ့မနက်မှာ မအူပင်ဆေးရုံကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရထားတာတွေ၊ အရိုက် ခံထားရ တာတွေ က မကြည့်ရက်စရာပါ။
မနေ့ညနေက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒီနေ့မနက်မှာ ကျမတို့တတွေ မအူပင်မြို့နယ် အထွေထွေရောဂါ ကုဆေးရုံကြီးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာအထိ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး တတ်နိုင်သမျှ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝပြေလည်သွားပါပြီ လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
လောလောဆယ်မှာ မနေ့ကလို အကြမ်းဖက်မှုမျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်အောင်တော့ နှစ်ဖက်စလုံးကို ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမသိခဲ့ရသမျှ ဖြစ်စဉ်ကို တင်ပြပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမပြောသမျှသာလျှင် ဧကန်ဖြစ်ရပ်မှန်လို့တော့ တစ်ထစ်ချ မယူဆစေလိုပါဘူး။ ဒီ့ထက် ပိုမို ပြည့်ပြည့် စုံစုံ မေးမြန်းစုံစမ်းခွင့်၊ သိရှိခွင့်ရဦးမယ်ဆိုရင် ဒီ့ထက်ပိုမိုတဲ့ ဖြစ်ရပ် မှန်တွေ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဇာတ်လမ်းအစကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က၊ မအူပင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေ စတင်ကျူးလွန်ခဲ့ တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။
မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပလောင်ကျေးရွာအနီးရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်း အများစုနဲ့ ပိုင်ရှင်ရှိ လယ်မြေအချို့အပါဝင် လယ်မြေဧက (၅၅၀၀) ကို ရေဆိုးစွန့်ပစ်မြောင်းဖော်ဖို့ဆိုပြီး တရားမ၀င် သိမ်းယူခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရေဆိုးစွန့်မြောင်းစီမံကိန်းအတွက် အသုံးပြုတဲ့မြေက အနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်ပြီး၊ မြေအများစု ကတော့ ဒေါက်တာဦးမြင့်စိန်ရဲ့ Orchard Company ပိုင် ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဆိုပါမြေတွေမှာ ဘာလုပ်ငန်းမှ ကြီးကြီးမားမား လုပ်ကိုင်တာမတွေ့မြင်ရပေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတော့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မြွေတွေနဲ့ကြွက်တွေ မွေးမြူတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သိမ်းယူထားခဲ့တဲ့ မြေအများစုဟာ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေအဖြစ်ပဲရှိနေပြီး ချုံနွယ်ပိ တ်ပေါင်းတွေသာ ဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။
လယ်မြေအသိမ်းခံခဲ့ရသူတွေအပါဝင်၊ ရွာသူရွာသားအများစုဟာ ဆင်းရဲတွင်းနက်သထက် နက်လာတယ် ဆိုတာထက်၊ငတ်သထက် ငတ်လာကြတာမို့ မိမိတို့ရွာအနီးက ဒီမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေနဲ့ အသက်ဆက်ကြဖို့ ဟာ ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
တရားဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်က တရားလက်လွတ် လုပ်လာတဲ့ အခါ၊ မိမိတို့အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့တဲ့ အငတ်ဘေး ဆိုက်နေ သူတွေက တရားဥပဒေဆိုတာကို အလေးမထားနိုင်တော့တာ ဘယ်လိုအပြစ်ဆိုဝံ့ကြမလဲ။
ဒီတော့ ကုမ္မဏီပိုင်ဆိုတဲ့မြေလွတ်တွေထဲမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါ တယ်။ မြေလွတ်မြေရိုင်း နှစ်ဧကလောက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ချုံနွယ်တွေကို ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းကြပါတယ်။ ချုံနွယ်တွေ ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းကြသူ ရွာသားတွေကို ရဲတပ်ဖွဲက လာရောက်တားမြစ်ပြီး၊ ပိုင်နက် ကျူးကျော် သူတွေအဖြစ် ကုမ္မဏီက အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း အသိပေးပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ တခြားည်းလမ်း မရှိတော့တဲ့ ရွာသားတွေအတွက် ကတော့ သေမထူး နေမထူး ဖြစ်နေ ရပြီမို့ နောက်ဆုတ်စရာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ တရားဥပဒေဆိုတာထက် မျှတမှုကိုပဲ မျှော်လင့်မိကြတယ်။ ဒါက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ အခြေခံဇာတ်ပျိုးပါ။
မနေ့က နေ့လယ် မှာတော့ အရေးပေါ်အခြေအနေ ပုဒ်မ(၁၄၄)ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရွာသားတွေကို ၀င်
ရောက် ကျူးကျော်ထားတဲ့လယ်မြေတွေကနေ နောက်ဆုတ်ကြဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က အသံချဲ့စက်နဲ့
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှမဆုတ်ခွာကြတဲ့အပြင် ရွာထဲက ကျန်ရှိနေသူတွေပါ ထပ်မံရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ခလေးငယ်တွေပါ ပါဝင်လာကြပါတယ်။
စုစုပေါင်း ရွာသူရွာသားတွေ (၅၀၀) ကျော် လောက်ဖြစ်လာပြီး၊ တစ်ဖက်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက (၂၀၀)
ကျော် လောက် ရှိနေပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးကလည်း ရွေ့ရွေ့နဲ့ ရှေ့ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ရွှေ့လာနေကြ တာပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှေ့မတိုးကြဖို့ အသံချဲ့စက်နဲ့အော်တော့၊ရွာသားတွေကလည်း မင်းတို့ရှေ့မတိုးရင် ငါတို့လည်း မတိုးဘူးလို့ သံပြိုင်အော်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မရပ်ကြတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကျွံမိကြတာပါပဲ။ ရွာသူရွာသားတွေဖက်က စတင် ကျူးလွန်တယ်၊ ကိုမောင်စိုးဆိုတဲ့လူက ဓားနဲ့ စတင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာချင်း ဆိုင်တိုးမိကြတော့ ရှေ့ဆုံးက ရွာသားတွေက လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ကြတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၃၀) လောက်က လူအုပ်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်ဖြစ်တော့ နောက်က အမျိုးသမီးတွေက ရှေ့တိုးလာကြတယ်။
အဲဒီ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်က နှမသားချင်းမစာနာဘဲ (နင်တို့မိန်းမတွေဟာ ငါတို့ယောက်ျားတွေ ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီး) ရိုင်းပြစွာပြောဆိုတော့ မမူမူဝင်း ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက နင် မမိုက်ရိုင်းနဲ့ဆိုပြီး ၀င်ပြောပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဆဲဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်က သူ့ကို ပြန်ပြောရပါ့မလားဆိုပြီး မမူမူဝင်းကို လက်ကကိုင်လာတဲ့ နံပါတ်တုတ်နဲ့ ရိုက်ပါတယ်။
ဒါကိုမြင်တော့ လူငယ်တွေက သည်းညည်းခံပြီး မနေသာတော့ပဲ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက် ထိုးခုတ်မှုတွေ စတင်ဖြစ်ပွားရတာပါပဲ။
ဒီလို ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုတော့ သေနတ်ပါလာပါတယ်။ အချက်ပေါင်း(၁၅၀)လောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါ တယ်လို့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ မိုးပေါ်ထောင်ပြီးပစ်တာ ဟုတ်မဟုတ် ကတော့ ဆေးရုံ မှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ လယ်သမားတွေက သက်သေခံကြပါလိမ့်မယ်။
စတင်ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ ယူဆရသူကတော့ ပြင်းထန်တဲ့ဓားဒဏ်ရာကြောင့် ကွယ်လွန်သွား ရှာ ပါပြီ။
သူတို့ လက်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်း ရွာသားတွေက ၀န်ခံပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရွာသူရွာသားတွေ အများစုက ရွာထဲကို မပြန်ရဲကြပါဘူး။
ငတ်လို့ လယ်မြေတွေ ၀င်လုမိတာပါလို့လည်း ကျမကို ၀န်ခံကြရှာပါတယ်။ ကျမစကားကိုလည်း နားထောင် ပါ့မယ်တဲ့။ တစ်ခုပါပဲတဲ့။ သူတို့ရွာထဲ ပြန်ဝင်ရင် မဖမ်းပါဘူး၊ အရေးမယူပါဘူး ဆိုတာကိုတော့ အစ်မ တာဝန် ယူပေးပါတဲ့။
ကျမ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း ညှိနှိုင်းကြည့်ပါသေးတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေက (တိုင်ချက်ဖွင့်ထားတာမို့ ဥပဒေ အရပဲ ဆောင်ရွက်ရမှာပါတဲ့)။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ရွာထဲပြန်လာဖို့တော့ ကျမ မတိုက်တွန်းခဲ့နိုင်ပါဘူး။
စုစုနွေး ~ -
မအူပင်ခရိုင် မလက်တိုကျေးရွာအနီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံ လူတစ်စုတို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ပလောင်ကျေးရွာအနီးရှိ အော့ချက် (ဒ်) ကုမ္ပဏီပိုင် ဧက ၅၅ဝရှိ ငါးမွေးမြူရေးကန် အနီး၌ ဒေသခံလူတစ်စုနှင့် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်တွင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နှင့် ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ပလောင်ကျေးရွာ အမက၌ ရွာသူရွာသား ၁၅ဝ ခန့်ကို တွေ့ဆုံပြီး ငါးကန် ပြုလုပ်ထားသည့် မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် အခြေအနေအရ လိုအပ်၍ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တားမြစ်မိန့် ပုဒ်မ(၁၄၄) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် တာဝန်ရှိသူများက ကန်ပေါင်ပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် အင်အား ၁၅ဝ ခန့်ရှိ လူအုပ်စုနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသဖြင့် အဆိုပါ လူအုပ်စုမှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် ညနေ ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် လူအင်အား ၁၅ဝ ခန့်သည် တုတ်၊ ဓားလက်နက်များ ကိုင်ဆောင်၍ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာကြသဖြင့် ကန်ပေါင်တွင် လုံခြုံရေးတာဝန် ယူထားသော ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အေးချမ်းစွာ ပြောဆို၍ တားဆီးခဲ့သော်လည်း လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ် လူစုခွဲ သော်လည်း လူစုကွဲမသွားဘဲ ညနေ ၆ နာရီမှ ၆ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်အထိ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ အရာရှိနှစ်ဦး၊ အခြားအဆင့် ၂၈ ဦးနှင့် အရပ်သား ၁၅ ဦးတို့ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒဏ်ရာရရှိသူများ အနက်မှ ရဲတပ်သား ရဲကျော်သူမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သဖြင့် မအူပင်မှ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူစဉ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
အလားတူ အရပ်သား ၁၅ ဦးတို့သည် ဖူးရောင်ပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာများဖြင့် မအူပင်ဆေးရုံသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် ည ၇ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါနယ်မြေတွင် တည်ငြိမ်မှု ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
Posted: 27 Feb 2013 10:08 PM PST
Protes: Rosmah Mansor 'diserang' siswi UKM BANGI: Sekumpulan mahasiswi daripada Ikatan Studi Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (ISIUKM) hari ini telah melakukan protes aman di hadapan Dewan Canselor Tun Abdul Razak (Dectar) terhadap isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor.
Walau bagaimanapun, apa yang menghampakan mahasiswi tersebut adalah 'ketakutan' Rosmah untuk bertemu dengan mereka apabila beliau telah dibawa keluar secara senyap-senyap melalui belakang kereta-kereta yang diletakkan di sekitar dewan tersebut.
"Perkara yang kita mahu hari ini hanya untuk menyatakan hasrat rakyat terhadap Datin Seri Rosmah, namun ternyata beliau begitu takut untuk bersemuka dengan kami.
"Walaupun kami tidak berjaya untuk bersemuka dengan Rosmah pada hari ini, namun kami telah berjaya membuat Rosmah balik dengan cara yang itu. Ini baru permulaan dari kami," tegas Hamiza Hani Omar, Pengerusi Hal Ehwal Siswi ISIUKM merangkap Timbalan Setiausaha Agung Gamis. -HD